Samsung Galaxy Note7 gafere AnTuTu | Gam akporosis
Nyaahụ anyị mụtara na OnePlus 3 bụ eze ugbu a site n'aka AnTuTu, na benchmarking ngwá ọrụ nke anyị nwere ike ịma ma ngwaike nke ekwentị anyị na-agbaso nkwenye ma jiri ya tụnyere ndị smartphones ndị ọzọ ịmata n'ezie arụmọrụ ya. Ngwaọrụ bara uru ọtụtụ ụlọ ọrụ iji kwuo maka omume ọma na uru nke ngwaahịa ha, ma e wezụga eziokwu na a na-ejikarị ya dị ka isi iyi maka nkwụsị ma si otú a mara nkọwa nke njedebe na-abịa.
Ọ bụ ugbu a mgbe Samsung Galaxy Note7 ka a hụrụ na AnTuTu na ihe na-esi na ya pụta bụ otu esi atụ anya ya. Achọpụtala mgbawa nke Snapragon 820 na obi ọkụ nke ọnụ ya na quad-core CPU na Adreno 530 GPU nke a ga-enye nke ọma eserese. Ihe dị ịtụnanya bụ na ọ na-egosi na nhazi a mgbe a tụrụ anya na ọ ga-apụta na ụdị dị iche iche dịka Snapdragon 823 na United States na China, ebe na mba ndị ọzọ ọ ga-eme na Exynos 8893.
Nnwale nke AnTuTu gafere na-egosikwa na ihuenyo nke Galaxy Note7 ga-ebu a 1440 x 2560 mkpebi. Ihuenyo nwere ike ịdị n'etiti 5,7 sentimita asatọ na isii nha. Banyere RAM, ebe ụfọdụ ọnụọgụ egosila na ọ ga-abụ 6 GB nke RAM, na AnTuTu 4 GB pụtara, ihe na-achọ ịmata ma ọ dịkarịa ala. Anyị nwere ike iche na a ga - enwe nhọrọ abụọ dị iche na nha, otu nwere 64G / 4GB na onye ọzọ nwere 128GB / 6GB nke ebe nchekwa dị n’ime ya na RAM n’otu n’otu.
Àgwà ndị ọzọ nke ekwentị Samsung ọhụrụ a ga-abụ USB Type-C na ihe nke ahụ ga-adị. iris nyocha ahụla na nchapu ụfọdụ. Mgbe ọ dị na ụdị gam akporo ọ na-anọ na 6.0 na AnTuTu, mgbe ọ na - apụta ọzọ na Geekbench ọ gara ozugbo na gam akporo 7.0.
El August 2 Ọ bụ ụbọchị maka 7 Galaxy Note, yabụ anyị ka nwere ntakịrị mkpọtụ n'ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Note7 na-egosi na AnTuTu
Google kwuputara nsụgharị ederede, nyocha Barcode, na ndị ọzọ na Google Ugbu a na Mgbata